नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने मानिसहरुले बनाएको पार्टी हो, नेपाली कांग्रेस । सर्वस्व हरण हुँदा पनि कांग्रेस भएका मानिसहरु छन् । हाँसीखुसी नै आफूलाई कुर्बानी गर्न पनि तयार भएका थिए । त्यो एउटा समय थियो । नेपाली कांग्रेस इतिहासकै भरमा पुरानो ब्राण्डलाई लिएर अगाडि बढ्न सक्दैन । नेपाली समाजमा, नेपाली राजनीतिमा यसले धेरै ठूलो योगदान गरेको छ । यसमा दुईमत छैन । तर त्यो मात्रै विषयले अगाडि जान सकिँदैन ।
कांग्रेसको त्यही गौरवपूर्ण विगतलाई देखाएर अहिले चल्न सकिँदैन । अहिलेकै समयअनुसार हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । प्राथमिकताहरु बदल्न आवश्यक छ । कांग्रेस परम्परागत ढंगले मात्रै चल्यो, यसले आफूलाई आधुनिकीकरण गर्न सकेन, विषयहरुमा परिमार्जन गर्न सकेन, बिपी कोइरालाको समयमा जस्तो धारिलो हुन सकेन भन्ने जस्ता कुराहरु आम कांग्रेसहरुलाई पनि महसुस भइरहेको छ ।
त्यसैले विचारगत र व्यवहारगत पक्षबाट कांग्रेसले आफूलाई स्पष्ट बनाउन जरुरी छ । बिपीको समयमा नेपाली कांग्रेस मुद्दागतरुपमा एकदमै धारिलो थियो । अहिले त्यस्तो छैन । हामीले आर्थिक, सामाजिक, राज्यका विभिन्न क्षेत्र र समुदायका बारेमा, राज्यको संरचनाको बारेमा, समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने बारेमा, हामीले एउटा प्रष्ट दृष्टिकोण निर्माण गर्न जरुरी छ ।
बिपीले कांग्रेसको नेतृत्व गर्दा उहाँ राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा कसैसँग पनि डराउनु भएन । सामन्तविरुद्ध लड्न कुनै पनि पुँजीपतिसँग डराउनु भएन । कसैले दिने चन्दा घट्छ कि वा दिँदै दिँदैनन् कि, कुनै पुँजीपति मसँग रिसाएर टाढा हुन्छ कि भन्ने जस्ता सानातिना स्वार्थले उहाँलाई कहिल्यै प्रभावित पारेन । पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा त्यस्ता कुराले धेरै प्रभाव पार्ने स्थिति बनेको छ ।
कुनै पनि राजनीतिक दल वर्तमानमा कस्तो छ, त्यसले वर्तमानका मुद्दाहरुलाई कसरी छोएको छ, समाजका आकांक्षा, चाहनाहरुलाई कसरी समेटेको छ, सबै पुस्ता, जाति, संस्कृति, समुदाय, वर्गका मान्छेलाई कसरी समेट्न सकेको छ ? त्यसको आधारमा पार्टीप्रतिको दृष्टिकोण बन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
अर्को दृष्टिकोणले हेर्दा नेपाली कांग्रेस ‘टेस्टेड’ पार्टी पनि हो । क्रान्तिबाट आएर एकैचोटि सत्ता चलाउन जनतासँग अपिल गरिरहेको अवस्था छैन । यसले धेरैपटक क्रान्तिको नेतृत्व गर्‍यो । धेरै पटक सरकारको नेतृत्व पनि गरिसकेको छ । यसर्थ, कांग्रेसका कुरा सुनिरहने जनताले ‘तिमी सत्तामा हुँदा के गर्‍यौ त ?’ भन्ने प्रश्न गरिरहेको हुन्छ ।
त्यसैले, सत्तामा गएर परीक्षित भइसकेको पार्टीले आफूलाई रुपान्तरण गरेको महसुस गराउनका निम्ति अत्यन्त प्रगतिशील मुद्दाहरु लिएर आउन सक्नुपर्छ । व्यवहारिक र प्रगतिशील मुद्दाहरु ल्याउन सक्नुपर्छ । त्यसैले आजको हाम्रो मुख्य चुनौती यी हुन् । यी चुनौतीहरु सामना गर्न सक्यौं भने कांग्रेसलाई हामीले पुनः अगाडि लैजान सक्छौं । उल्लिखित विषयहरुलाई चुनौती नै ठानेनौं र जसरी चलिरहेको छौं, त्यसरी नै चल्दा फेरि सत्तामा जान सकिन्छ, फेरि पनि कांग्रेसलाई उचाईमा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो सोचाई रह्यो भने आजको चुनौती सामना गर्न सक्दैनौं ।
कांग्रेसले आफ्नो पुनर्जागरणका लागि दुईवटा पक्षमा काम गर्नुपर्छ । आन्तरिक सुधारको काम पहिलो हो । पार्टी सञ्चालनको विधि, प्रक्रियाजस्ता आन्तरिक लोकतन्त्रका विषयहरु आदि । हामी कस्तो देखिने ? हामी जस्तो देखिन्छौं, समाजले हामीलाई त्यसैगरी बुझ्छ । त्यसैले हामी सचित्र देखिँदा प्रष्टताका साथ देखिनुपर्छ । यस्तो प्रष्टता प्राप्तिका लागि पनि हामीले केही कुरा गर्नैपर्छ । हाम्रा आन्तरिक मामिलाहरुलाई सुधार गर्न जरुरी छ । हामीप्रति लक्षित प्रश्नहरुको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन जरुरी छ ।
एउटा राजनीतिक पार्टी भविष्यसँग नजोडिइकन चल्न सक्दैन । वर्तमानका एजेण्डाहरु स्पष्ट नगरी अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यो पनि हाम्रा लागि चुनौती नै हो । वर्तमानका विषयहरुलाई हामीले कसरी प्रष्ट्याउने, भविष्य हामीले कसरी देखाउने भन्ने सन्दर्भमा वैचारिक पक्षमा पनि हामीले धेरै काम गर्न आवश्यक छ । अहिले हामी यी दुवै विषयलाई पार्टीभित्र उठाइरहेका छौं । आन्तरिक सुधारका लागि पार्ट्टीलाई विधि र विधानमार्फत् सञ्चालन गर्ने मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाइरहेका छौं ।
पार्टीमा जतिसुकै शक्तिशाली र पुरानो भए पनि, जतिसुकै महत्वपूर्ण पदमा बसेको भए पनि व्यक्तिको स्वविवेकीय ढंगबाट पार्टी चल्नु हुँदैन । त्यो विधानभन्दा तलै हुन्छ । त्यो व्यक्ति पार्टीको विधानभन्दा तल हुन्छ । सर्वोच्च सधैं विधान नै हुन्छ । त्यसैले विधानको सर्वोच्च व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने स्थिति बन्नुपर्छ । कतिपय सवालहरुमा हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ । कुनै पनि अवस्थामा विधान र व्यवस्थाहरुलाई उल्लंघन गर्ने अवस्था हुनुहुँदैन । विधि र प्रक्रियाबाट नै समस्या हल गर्नुपर्छ । पार्टीभित्र थुप्रै समस्याहरु छन् । ती समस्याहरु हल गर्ने विधि पनि पार्टीले विधानले प्रष्ट गरेको छ । त्यसैले समस्याहरुको विधिवत ढंगले निराकरण गर्नुपर्छ । पार्टीको संरचना विधिगत ढंगले चल्नुपर्छ । पार्टीका क्रियाकलाप पार्टीको विधानअनुसार हुनुपर्छ ।
त्यागको क्षतिपूर्ति पदबाट ?
दोस्रो कुरा, कांग्रेसमा नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ताबीच एकखालको अन्तरविरोध छ । एउटा पुस्ता लामो त्याग, तपस्या र समर्पणबाट आउनु भएका अग्रजहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले आफ्नो योगदानको क्षतिपूर्ति पदीय भूमिका प्राप्त गरेर लिन चाहनुहुन्छ । त्यसले हाम्रो आन्तरिक प्रतिष्पर्धालाई सहज बनाउन सकेको छैन । नेपाली कांग्रेस ‘मास बेस्ड’ पार्टी हो । कांग्रेस प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने पार्टी हो । यो खुला पार्टी हो जहाँ कार्यकर्ताले पत्याएको अवस्थामा जो आए पनि नेतृत्वमा पुग्ने अवस्था रहन्छ । यसर्थ, हामी कांग्रेसलाई खुला पार्टी बनाउन चाहन्छौं, क्याडर बेस्ड होइन मास बेस्ड पार्टी बनाउन चाहन्छौं । यसले सम्पूर्णरुपमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसाथ गरेको हुनुपर्छ ।
यो कुरा कांग्रेसभित्र सबैलाई स्वीकार्य छैन । हामी केहीले यी कामलाई अत्यावश्यक ठान्दछौं । केही कांग्रेसीहरु नै यो कामलाई आवश्यक ठान्नुहुन्न ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेको एउटा विद्यार्थी विदेश नगईकन नेपाली समाजमा बसेर का‌ंग्रेस बनेर योगदान गर्न चाहन्छ भने उसलाई यति वर्ष र उति वर्ष भनेर अवरोध खडा गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हाम्रो छ । तर त्यो हाम्रो मान्यता हो । धेरै लामो समय लगाएर यो पार्टी निर्माण गर्ने, मैलेभन्दा बढी योगदान गर्नेहरुको भनाइ फरक छ । उहाँहरु भन्नुहुन्छ- ‘त्यस्तो होइन, आज आएर कहाँ विश्वास गर्न सकिन्छ ? यत्रो लामो समयसम्म हामीले कुर्बानी गर्‍यौं । हामीले जिम्मेवारी प्राप्त नगरेर यी नयाँ आएकाहरुले कसरी जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सक्छन् ?’
यस्तै खालको बहस नेपाली कांग्रेसभित्र छ । हामी चाहन्छौं, ‘मैले काम गरेको ३० वर्ष भो । तीन महिना अगाडी मैसँग कोही प्रतिष्पर्धा गर्न आउँछ र त्यसले जित्छ भने उसलाई प्रतिष्पर्धामा उत्रन दिनुपर्छ । किनभने प्रतिष्पर्धात्मक पद्धतिलाई हामीले पूर्णरुपमा आत्मसाथ गरेको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । हामीले यो विषयलाई पार्टीभित्र व्यापकरुपमा उठाइरहेका छौं । दोस्रो विषय यो हो ।
तेस्रो विषय हो- इतिहासमा गरेको त्याग, बलिदान र काममा गर्व गरेर मात्र हुँदैन । बिपी कोइरालाको सरकार सफल थियो, क्रान्तिकारी थियो भनेर त्यसैलाई मात्र भजाएर हामीले आज सरकार निर्माण गर्ने कुरा स्वभाविक हुन सक्दैन । त्यसैले त्यसको जगमा उभिएर हामीले आजका विषयहरुलाई कसरी हेरिरहेका छौं ? १०-१५ वर्षपछि नेपाललाई हामी कस्तो बनाउन चाहिरहेका छौं ? यससँग जोडिएको सैद्धान्तिक पक्ष, विचारगत पक्ष, योजनागत पक्ष पनि हामीले प्रष्ट पार्नुपर्छ ।
गोविन्द केसीसँग सम्झौता गर्न जहाँ पनि हस्ताक्षर गर्न तयार हुने, तर गोविन्द केसीसँग सम्झौता गर्दैगर्दा त्यसको सैद्धान्तिक सार के हो ? त्यो कुरा हाम्रो दस्तावेजमा ल्याउन जरुरी छैन ? हामीले बनाउन चाहेको चिकित्सा शिक्षा कस्तो हो ? हामीले बनाउन लागेको शिक्षा नीति कस्तो ? हामीले बनाउन चाहेको स्वास्थ्य नीति कस्तो हो ?
हामीले विगतमा केही त्रुटिहरु गरेका छौं । यसलाई महसुस गर्दैमा कद कसैको घट्दैन । त्यसैले विगतमा गरिएका केही त्रुटिहरुलाई महसुस गर्नुपर्छ । अब त्यो दोहोरिँदैन भन्ने विश्वास दिलाएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । हामी विगतको आफै‌ंभित्र निर्मम समीक्षा गरेर कमिकमजोरी कहाँ भएको हो त्यसलाई आत्मसाथ गरेर अब नयाँ ढंगबाट कांग्रेस अगाडि बढ्नुपर्छ ।
(नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलको रुपान्तरणको बहस स्तम्भ हरेक बिहीबार प्रकाशित हुनेछ )